Makeup Tricks Kune Vatangi | Bezzia
Tony Torres | | Runako
Makeup inonakidza, kugadzira, kutamba uye yakakodzera kune wese munhu anoda kuishandisa senzira yekutaura. Kune vamwe vazhinji, Makeup chishandiso chekugadzirisa nacho zvimwe zvinhu zveganda, pamwe nekusimbisa kusimba kwechiso. Kune akawanda mahunyanzvi nawo ekugadzira mhando dzakasiyana dzekugadzira, tsiye kana dhizaini dhizaini, pakati pevamwe.
Asi kana iwe uri kutsvaga kuti udzidze mamwe ekugadzira mateki evatangi, kungave kwekushandisa kwako pachako kana nekuti urikuda kutanga munyika yezvigadzirwa, cherekedza anotevera matipi. Neiyi nzira, iwe unozogona kutora mukana kune zvese zvigadzirwa zvako, iwe uchadzidza maitiro akareruka ekuwedzera ako masimba uye iwe uchaona kuti sei chigadzirwa chimwe chete chinogona kukwana yebasa rese rekugadzira.
1 Makeup yevanotanga
1.1 Chimwe chigadzirwa chekushandisa kwakasiyana
1.2 Pepa rehurukuro
1.3 Usakanganwa nezve tsiye
1.4 Kugadzirira ganda, kiyi mumakeji kune vanotanga
Iko kupihwa kwezvigadzirwa zvemakeji kwakakura kwazvo panguva ino, nekutenda muchidimbu kumasocial network uye nerunako-iwo maratidziro evanogadzira. Unganidzo dziri kuvandudzwa munguva pfupi inotevera uye gare gare, mumvuri mutsva palettes, zvigadzirwa zveinovel zvekugadzira mimvuri nemwenje kumeso uye nemhando dzese dzemuromo dzinogadzira maratidziro anoshamisa.
Saka iwe unogona kuyedzwa kuti utenge miriyadhi yezvigadzirwa iwe pachako kushandisa kwako pachako. Uye, kunyangwe zviripo kune wese munhu uye paine sarudzo dzemabhajeti ese, hazvisi zvigadzirwa zvakawanda zvakafanira kuti zvigadzire zvakakosha kwezuva nezuva. Kunyanya kana iwe uri wekutanga, aya mateki ekugadzira achakubatsira zvakanyanya kwauri kutanga munyika inonakidza yezvigadzirwa.
Chimwe chigadzirwa chekushandisa kwakasiyana
Kunyangwe mumastand ezvitoro zvekugadzira iwe uchazowana akawanda akasiyana zvigadzirwa zvekushandisa kwega kwega, unogona kuzvibatsira kuti ugadzire kutaridzika kuzere. Semuenzaniso, ne bronzing powders iwe unogona kuisa vara kumeso kwako uye panguva imwechete ichashanda semumvuri weziso. Mumvuri une greyish pasi pasi yakakwana yekugadzira makwikwi. Uye mvura madhayi, shandira kupenda matama, pamuromo uye kunyange mumaziso.
Kugadzira rondedzero yakanaka hakusi nyore, kunyangwe nekudzidzira iwe unozokwanisa kugadzira mutsetse wakaringana wekutsanangura chimiro cheziso rako. Liquid eyeliners zvakanyanya kunetsa kushandisa kana iwe uri wekutanga, saka zvinokurudzirwa kutanga nemimvuri. Iwe unongoda chete bhurosi ine beveled uye matte nhema eyeshadow. Nemabatiro madiki iwe unogona kugadzira rondedzero yakakwana uye kana iwe uchida kugadzirisa, iwe unogona kuzviita pasina kushatisa zvese zvigadzirwa.
Usakanganwa nezve tsiye
Tsiye dzakakosha nekuti dzinoshandura zvachose kutaura kwechiso. Kunyangwe paine akawanda magadzirirwo ezvetsitsi, ezuva nezuva hazvina basa kuti uite basa rakakura kuti uwane yakanaka mhedzisiro. Iwe unongoda diki diki beveled brashi uye mumvuri we ruvara rwakafanana nebvudzi riri pazviso zvako. Nediki bata bata zadza mipata, gadzira diki chimiro kutsanangura. Pedzisa negadziriro gel kuitira kuti pahuma bvudzi rirambe riri panzvimbo zuva rese.
Kugadzirira ganda, kiyi mumakeji kune vanotanga
Imwe yemhosho dzinowanzoitika ndeyekupotsa nhanho yakakosha kwazvo yemakeup, chero iri basa rechimwe chiitiko chakakosha kana zuva rekugadzira. Iwo akanakisa ekugadzira mateki evatangi hapana kana kugadzirira kwakanaka kweganda. NIwe haufanire kumbokanganwa kuchenesa ganda rechiso chako zvakanaka.kana kuisa zvigadzirwa zvakanangana nerudzi rweganda rako. Kirimu inodzora uye eye ziso matanho akakosha e tsika yekunaka.
Chinhu chakakosha kwazvo kuti urambe uchifunga mupfungwa dzako paunenge uri wekutanga mumakeup ndechekuti hapana chiyero chemunhu wese. Zvakanaka kuti iwe ufuridzirwe nevamwe vanhu uye shandisa dzidziso kuti udzidze maitiro ekugadzira akasiyana maratidziro nemakeep. Asi usakanganwa kunakidzwa nezvaunoita, zvinoitwa nevamwe zvakanaka, vamwe vanoita zvisirizvo. Tsvaga izvo zvinoita kuti unzwe zviri nani, edza kusvikira iwe wawana izvo zvinonzwa zvakanakira iwe uye pamusoro pezvose, nakidzwa nekugadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Mazamu ekugadzira evatangi
Mabhurauzi nemahembe ari kutokunda kuZara
Masiketi madhimoni anotora nzvimbo yavo Kudonha uku